जापको लाजमर्दो हारपछि के भने डा. हर्कबहादुर छेत्रीले? – खबरम्यागजिन
Homeखबरकालेबुङजापको लाजमर्दो हारपछि के भने डा. हर्कबहादुर छेत्रीले?
May 17, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि कालेबुङ, मुख्य समाचार 0
खबरम्यागजिनसित जाप अध्यक्ष डा. हर्कबहादुर छेत्री
हाऱ्यो जाप। के अब जाप हराएकै हो?
एउटा हारमा हराउने पार्टी भए विधानसभामा नै हराउने थियौँ। मोर्चाले नसोचोस्, नगरपालिकाको हारमा हामी सकिन्छ भनेर। अरू पार्टी सकिन्छ जाप सकिँदैन, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। हामी रहन्छौँ, जहाँ गलत भइरहेको छ, त्यहाँ हामी आवाज उठाउने छौँ, हामीलाई विश्वास छ- जनाताले असुरक्षाको भावनालाई त्यागेर बाहिर निस्किने अवस्थामा हामी पुऱ्याउने छौँ।
दुइवटा त जित्यो, जाप अध्यक्षले कसरी हेर्छ यो हारलाई?
मोर्चालाई बधाई। लडेरै जिते। चुनाउमा प्रयोग हुने तिगडममा हामी कलिलो छौँ, हामी निराश छैनौँ। नगरपालिकालाई हेरेर जाप जन्मिएको होइन। जाप मोर्चाको नेतृत्वको अयोग्यतालाई ध्यानमा राखेर, मोर्चाले गरेको मूल माग टुङ्गोमा पुऱ्याउँदैन भनेर निस्किएको हो। आशा नगरेको रिजल्ट आयो। निराशा त आउँछ तर यो क्षणिक हो। रिजल्ट जे होस्, लामो सोचेर निस्किएको पार्टी हो जाप। स्वच्छ राजनीतिको लागि निस्किएका हौँ। बिचलित अलिकति पनि छैनौँ। पहाडको जनताले मिरिकबाहेक सबैमा मोर्चालाई नै मन पराएको रहेछ भनेर नगरपालिकाको रिजल्टले बताउँदैछ, तर सँगसँगै जम्मै जोडेर हेर्दैछौँ 13 हजार विरोधीखेमा, समर्थनमा 10 हजार, हामी तीनहजारले कम्ति छौँ, एकदुइ छोडेर जाप दोस्रो स्थानमा छ। यो मोर्चाको निम्ति खतराको सङ्केत हो। पहाडका नगरपालिका क्षेत्रका आधासरोभन्दा धेरले मोर्चालाई रिजेक्ट गरेको छ, जाप त्यही बेसबाट उठ्नेछ र अर्को एउटा सशक्त आन्दोलनलाई प्रतिनिधित्व गर्नेछ।
गोर्खाल्याण्ड त होइन तपाईँहरू त छुट्टै राज्य भन्नुहुन्छ, अर्को सशक्त आन्दोलन भनेको त्यही हो?
त्यो आन्दोलनमा हामी जान्छौँ नी। शुरुदेखि नै भनेका छौँ अलगराज्य सम्भव छ तर सही नेतृत्वले सही ठाउँमा सहीरूपले उठाउनुपर्छ। यो ठूलो चिज हो, मसिना चुनाउलाई छुट्टैराज्यको हतियार बनाउनु हुँदैन। मोर्चालाई सुझाव छ, 19 सिट जिते पनि सडकको खाल्डा त्यस्तै छ, गार्वेजको अवस्था उही छ, नाली बगेको छैन, पिउने पानीको हाहाकार छ, यति हुँदाहुँदै नी मोर्चालाई नै जनताले जितायो, यसको अर्थ अलग राज्यको मुद्दालाई जनताले भोट दिएको हो तर मोर्चाले अलग राज्यको लागि एक पाइला पनि चालेको छैन।5वर्ष मोर्चाको एसिड टेस्ट हुन्छ। किन भने मैदानमा मोर्चा मात्र छैन, हामी पनि छौँ।
तपाईँहरूको दुई बिजेताको अब के काम?
उनीहरूले ‘वाचडग’-कोरूपमा काम गर्नेछन्। मनपरीमा रोक लगाउने काम गर्नेछन्।
हार स्वीकार्नु हुन्छ?
डेडवर्ष पुरानो पार्टी त हो जाप, पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ। त्यो म लिन्छु। मैले कसैलाई एक्सप्लानेशन त दिनु पर्दैन मैले। हामीसित उति समय पनि थिएन। त्यो खाले संसाधन पनि हामीसित थिएन, जो मोर्चा र तृणमूलसित थियो। हामीसित लङटर्म सपना थियो, अलग राज्यको सही आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने भिजन थियो, त्यसलाई नगरपालिका क्षेत्रका जनताले बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन् वा असुरक्षाको कारण सत्ताधारी पार्टीतिर गएका होलान्।
हुन त हामीले पनि बुझाउन नसकेकै हौँ। संसाधनको अभावको कारण पनि हामीले धेरै काम गर्न सकेनौँ, त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनैपर्छ, म लिन्छु।
मोर्चाले जित्नुको कारण के हो?
इन्द्रनील सेन फ्याक्टर भयो मोर्चाको लागि। मोर्चाले सेनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। इन्द्रनील सेनको मन्तव्य नभएको भए मोर्चासित मुद्दा थिएन। इन्द्रनीलको मन्तव्य सुन्दा मलाई लागेको थियो, कतै मोर्चा र तृणमूलको साँठगाँठ त छैन? मोर्चालाई सजिलो बनाइदिन इमोशनल कमेन्ट गरिवरी गए। त्यसैको कारण पहाडमा यस्तो रिजल्ट भएको हो नगरपालिकामा। नत्र भने खरसाङ, दार्जीलिङ कालेबुङमा रिजल्ट अर्कै हुनेथियो। फेरि एकपल्ट जातिभावनामा जनतालाई बगाउन चाहन्थे बिमल गुरूङ, त्यसमा इन्दद्रनील सेनले सहयोग गरिदिए।